Semalt: Inona no atao hoe hosoka ary ahoana no fomba hanalavirana izany?
Ny hosoka mando dia manondro ny endrika endrika tsy ara-dalàna na sandoka nataon'ny mpanao heloka bevava cyber. Ny scammer dia mahazo ny angona manokana, ny vola, ary ny hafa ny tombontsoa avy amin'ilay niharam-boina.
Oliver King, mpitantana ny Success Successor avy amin'ny Semalt , dia mizara hevitra manan-danja izay hanampy anao hiady amin'ny aterineto.
Ireto manaraka ireto ny fomba handosirana ny hosoka fanonerana:
Nangalatra na very entam-barotra
Fivarotana tsy nahazoan-dalana na hosoka.
Fangatahana na famerenana miverina, fangatahana hosoka amin'ny famerenana.
Ny fikambanana E-varotra dia miankina amin'ny fifanakalozam-bola elektronika hangatahana fandoavam-bola avy amin'ny mpanjifa. Noho izany dia nitombo ny isan'ireo fifandraisana elektronika izay nitarika ny fihenan'ny fisian'ny hosoka.
Ny karazana fandoavam-bola isan-karazany dia:
Ny sehatra an-tserasera rehetra izay mila ny angon-drakitra manokana toy ny kaonty banky na carte de crédit dia mety hampidi-doza ity fanafihana ity. Ao amin'ny loharanom-baovao, ohatra, mpivady manana banky, dia azo itokisana ilay sehatra. Saingy, raha toa ka tsy fantatra ny loharano, dia mety hampiseho ny fisorohana ny fahazoana mombamomba azy tsy ara-dalàna.
Ny fangalarana famantarana:
Izany karazana hosoka mahazatra izay mitranga ivelan'ny sehatra dizitaly. Mitranga izany raha misy olona iray misarika olona hafa ary mampiasa ny angon-dry zareo mba hamonoana heloka sasantsasany. Ny famonoan'olona amin'ny ankapobeny dia ankapobeny amin'ny fampiasana Wi-Fi an'ny daholobe ho toy ny fantsom-panamboarana mari-pamantarana fidirana.
Raha toa ka misy horohoron-tany iray hikapoka sehatra iray amin'ny tranonkalan'ny e-varotra ary mandefa ny mpiserasera amin'ny sehatra hafa. fomba amin'ny rafitra fiarovana rafitra.
Ny famindrana mivarotra sy ny fandoavam-bola fanampiny:
Ireo hackers dia mikendry tompon'andraikitra amin'ny e-varotra sy mpampiasa karatra amin'ny alalan'ny fangatahana vola alohan'ny hanomezana ny karatra famindram-bola na vola amin'ny faramparan'ny fotoana.
Ny hosoka ho an'ny mpivarotra:
Ity karazana hosoka ity dia mitranga rehefa manokatra kaonty fivarotana an-tsokosoko ny mpihetraketraka ho solon'ny fikambanam-barotra toa ny legitiana ary manao fiverenana avy amin'ny karatra fangalarana mangalatra. Manidy ireo kaonty avy eo ireo mpitsoa-ponenana alohan'ny ahafantaran'ny tompon-tsakafo fa vola sandoka.
Ahoana ny fisian'ny hosoka?
Ireo mpikatroka dia tonga lafatra amin'ny hetsika tsy ara-dalàna mahazo ny vaovao an-tserasera. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ireo hackers dia mihambo ho tena solontenan'ny tena sy solontenan'ny carte de crédit amin'ny alalan'ny fangatahana angon-drakitra. Avy eo, mampiasa ireto fomba manaraka ireto izy ireo mba hifaneraserana amin'ny famoahana ny mombamomba azy manokana.
Malware amin'ny alàlan'ny SMS
Fanadiovana ny fifamoivoizana amin'ny toerana sandoka
Ireo mpangalatra Cyber ​​koa dia nanampy ny fahazoana miditra amin'ny rafitra fiarovana ny tambajotra amin'ny fitadiavana ny patch na ny tadiny izay tsy tokony hatao. Ny fisian'ireny banga ireny dia ahafahan'ireo mpaka an-keriny mahazo fampahalalana amin'ny fisiana rindrina.
Ahoana no ahafahan'ny fikambanana e-varotra manamaivana hosoka?
Sarotra ny manala tanteraka ny loza ateraky ny hosoka amin'ny fivarotana e-varotra. Azonao atao ny mandray ireto fepetra manaraka ireto mba hiarovana ny orinasa amin'ny hosoka mando:
Miaraha miasa amin'ny mpamatsy vola voaporofo.
Mamolavola fitsipika mifehy ny fidirana amin'ny data manan-danja.
Manaova fanaraha-maso ara-pahasalamana amin'ny fototra matetika amin'ny fampiasana rindrambaotin'ny viriosy.
Avereno antoka fa ny kaonty mpanjifa amin'ny kaonty manokana no alohan'ny hividianana azy.
Mitandrema fa miovaova foana ny data sy ny mari-pamantarana.
Mampidi-doza ny anao sy ny mpanjifanao ny hosoka. Amin'ny alàlan'ny fitaovam-piadiana amin'ny tranokalan'ny e-varotra hanohitra ny hosoka, azonao atao ny manamarina ny fahamendrehan'ny orinasanao Source .